Golaha Wasiirada oo mowqif cad ka istaagay duqeyntii Mareykanka ee Gaalkacyo (Akhriso) - Hablaha Media Network
HMN:- Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa goor dhow war ka soo saaray duqeyntii Mareykanka uu ku beegsaday Ciidamada Maamulka Galmudug, iyadoo walaac looga muujiyay sheegashada Puntland ee ku aadan duqeynta ka dhacday duleedka Gaalkacyo.
War murtiyeed ka soo baxay Golaha Wasiirada ayaa waxaa ku saxiixnaa Ra’iisul Wasaaraha kuxigeenka, iyadoo loogu tacsiyadeeyay shacabkii iyo ciidankii ku dhintay duqeyntaas.
Sidoo kale Golaha Wasiirada ayaa ka dalbaday Mareykanka inay sharaxaad waafi ah ka bixiyaan duqeyntaas iyo sida weerarkaas ula socodsiiyay hey’adaha amniga Soomaaliya.
Golaha Wasiirada ayaa ugu baaqay Maamulada Galmudug iyo Puntland inay xiisada dejiyaan labada dhinac u dhaxeysa ee ka dhalatay duqeyntii habeen hore.
Si kastaba ha ahaatee qoraalkan ka soo baxay Golaha Wasiirada, kuna saxiixnaa Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ayaa ku soo aaday, iyadoo Mareykanka uu sheegay in duqeynta uu ka fuliyay duleedka Gaalkacyo uu ku bartilmaameedsaday Koox ka tirsan Al-Shabaab.